မိခင်ဖြစ်သူ၏ အခေါင်း ပြုတ်ကျသောကြောင့် သားဖြစ်သူသေဆုံး - Yangon Media Group
မိခင်ဖြစ်သူ၏ အခေါင်း ပြုတ်ကျသောကြောင့် သားဖြစ်သူသေဆုံး
မာကတ်ဆာ၊ ဇွန် ၁၇
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေဆီကျွန်းတွင် အသုဘအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပစဉ် မိခင်ဖြစ်သူ၏အ ခေါင်းပြုတ်ကျသောကြောင့် သား ဖြစ်သူသေဆုံးခဲ့ရကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ကဇွန် ၁၇ ရက်တွင် ပြောသည်။ မြောက်တိုရာဂျန်ခရိုင်ပါရင် ဒင်းတောင်ကြားဒေသတွင် အခေါင်းထမ်းသူများသည် အခေါင်းကိုမီး သင်္ဂြိုဟ်မည့် စင်မြင့်ပေါ်သို့ထမ်းတင်စဉ်တွင် အခေါင်းသည်သားဖြစ်သူ၏ခေါင်းပေါ်ပြုတ်ကျခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်သားဖြစ်သူ ဆာမန်ကွန်ဒို ရူရာအသက် (၄ဝ)နှစ်မှာ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောသည်။
”မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ အခေါင်းကို လောင်တိုက်ပေါ်မတင်နေတုန်းမှာပဲ ထမ်းစင်ကျိုးကျတဲ့အတွက် အ ခေါင်းနဲ့ရိုက်မိသွားတာ”ဟု ခရိုင်ရဲ မှူးကြီး ဂျိုလီယန်ကိုဆီရိတ်က ပြောသည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုမှာလည်းအင်တာနက်ပေါ်သို့ပျံနှံ့ခဲ့ပြီး ကြည့်ရှုသူ အလွန်များပြားခဲ့သည်။ အခေါင်း ပြုတ်ကျသည့်အတွက် လောင်တိုက်ရှိရာစင်မြင့်ပေါ်မှ လူများသည် မြေကြီးပေါ်သို့အတုံးအရုံးလိမ့်ကျခဲ့သည်။ ထိုသို့လိမ့်ကျလာသော အခေါင်းနှင့်ရိုက်မိပြီး အောက်မှ သားဖြစ်သူသေဆုံးခဲ့ရသည်။
ဘေးတွင်ရပ်ကြည့်နေသူများသည် ဒဏ်ရာရသူများကို ဆေးရုံသို့အလျင်အမြန်ပို့ခဲ့ကြောင်း၊ သို့ သော်ဆေးရုံပေါ်တွင် သားဖြစ်သူ သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း၊ အခေါင်းထမ်းသည့် ထမ်းစင်မခိုင်ခံ့သည့်အတွက် ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း ရဲမှူးကြီးက ပြောသည်။ ယခုအခါသားဖြစ်သူ၏ အ ခေါင်းကိုမိခင်ဖြစ်သူ၏အခေါင်း ဘေး၌ထားထားသည်ဟုလည်း ရဲမှူးကြီးကပြောသည်။ အင်ဒိုနီးရှား ရှာတိုရာဂျန်တိုင်းရင်းသားများသည် အသုဘပွဲကိုတခမ်းတနားကျင်းပလေ့ရှိသည်။
မွန်ပြည်နယ်ရှိ မြို့ ကြီးငါးမြို့တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားနေပြီး ထောင်ချီသော ရေဘေး
ဖိလစ်ပိုင်တွင် ထရန့် ဆန့်ကျင်ရေး အင်အား ၂၀၀၀ ခန့်ဖြင့် ဆန္ဒပြ၊ ရဲများက လူစုခွဲခဲ့ရ
အစိုးရ၏ တတိယ တစ်နှစ်တာအတွင်း ကျပ်သန်း တစ်သောင်းကျော် လူမှုဖူလုံရေး အာမခံ လုပ်သားများသို့ေ??
ကိုဖီအာနန် ကော်မရှင်၏ အဆိုပြုချက် ၈၈ ချက်အနက် ၈၁ ချက် အကောင်အထည်ဖော် ပြီးစီး၊ ပြဿနာများကို ??
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်?